IINGCAMANGO ZESIHLALO SEWINDOWS EZINGAMA-55 (IIBHENTSHI, UKUGCINA KUNYE NEECUSHION) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango zeSihlalo seWindows ezingama-55 (iibhentshi, ukuGcina kunye neeCushion)
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono yezihlalo zefestile ukukhuthazwa ukuzisa olu hlobo loyilo luhle kwikhaya lakho.
Ezi zimvo zezihlalo zefestile zinokukunceda ukuguqula indawo ephantsi kwefestile yakho uye kwindawo entle yokuphumla, yokufunda, yokujonga inkwenkwezi okanye yokulala. Kude kube kutshanje izihlalo zefestile bezifunyanwa kuphela kwikhaya elidala elinabadala.
Nangona kunjalo, njengoko umkhwa ubasusile abaninimzi abaninzi bafumana iindlela zokuyila zokongeza uyilo lwezihlalo zefestile ukufumana ukujonga nje abafuna.
Kumfanekiso ongentla ibhentshi yewindow ebanzi nepholileyo ebekwe kwiwindow enefestile enefestile yaseFrance enikezela indawo engaqhelekanga kunye neendawo zokuphumla, ezilungele iintlanganiso ezincinci kunye nelounging.
Iifestile ezinkulu aziboneleli ngokukhanya kwendalo kuphela, kodwa nembono entle yokutshatisa umxholo oshushu ongathathi hlangothi wendawo. Iibhentshi ezakhelweyo zinezihlalo ezivulekileyo zokuhlala kunye nemiqamelo eyahlukeneyo ngobukhulu, kunye nokujula kunye nokunitha ukuze uzive ubuyela umva ngakumbi.
Ibhentshi yeSitulo seWindows
Isihlalo seWindow yesiqhelo kunye neeCushion ezinemibala
Yakhelwe kwisihlalo seBench ngoGcino
Isihlalo se Window ngoGcino
Isihlalo sefestile esiqhelekileyo kwigumbi lokuhlala
Isihlalo seWindows Window
Igumbi lokulala leWindows Window Seat
Isihlalo sefestile kwigumbi lokutyela
Ikati ye Window Seat
Isitulo seWindows Window
Ubungakanani besihlalo se Window
Uyakha njani iWindows Window
Igumbi lokulala ngefestile
Isihlalo se Window ngeDraw
Ibhedi yezihlalo efestileni
IOfisi yasekhaya enesihlalo seWindows
Isitulo sefestile yasekhitshini
Akukho kukhanyela ukuba isihlalo sefestile sinokongeza ubuntu obuninzi kuyilo lwakho lwangaphakathi. Nazi ezinye zezona zizathu zibalulekileyo zokongeza isitulo sefestile kwigumbi lakho:
Yongeza uphawu kwigumbi lakho -Isihlalo sefestile sinokongeza umdla onomdla kwigumbi. Ungakwazi nokuyigxininisa ngokuchukumisa kwakho kunye neentambo zakho ezizithandayo okanye ukuphonsa imithwalo.
Uyilo loyilo -Uyilo lwakho lwezihlalo zefestile lunokuthelekiswa nobuhle bangaphakathi bekhaya lakho. Zingakhiwa ngezinto ezifanayo nezinto ezikhoyo zokubumba okanye iikhabhathi ukuze zifanise uyilo olukhoyo kudala uyilo oludibeneyo.
Indawo eyongezelelweyo - Isihlalo sefestile senza indawo yokwamkela iindwendwe. Inokuba sisihlalo sokubuyela umva ukuba ukonwabisa iindwendwe ezininzi.
Ukufunda i-nook -Isihlalo sefestile sinokuba yindawo epholileyo yokugoba incwadi kunye nokonwabela ukukhanya kwendalo okuvela kwinduduzo yekhaya lakho. Unokonwabela ukuziva ungaphandle kwaye ufunda ukonwaba ngokupheleleyo. Izihlalo ezininzi zefestile zibekwe phakathi kweeshelufu zencwadi ezakhelweyo ukunika ukufikelela ngokulula kwizinto ozithandayo zokufunda.
Indawo yokugcina - Iikhabhathi eziphantsi kwesihlalo sefestile zenza indawo entle yokugcina eyongezelelweyo. Iibhentshi ezininzi zinomphezulu othinjiweyo onokubeka iingubo, iilinen, iithoyi okanye izixhobo. Ibhentshi eneedrowa lolunye ukhetho olunikezela ngesithuba esongezelelweyo kuyo nayiphi na into oyifunayo ngaphandle kwamehlo.
umbono wekrisimesi kumfazi wam
Nandipha izimvo Iindawo ezininzi ziyabanda kwinxalenye enkulu yonyaka. Ngesitulo sefestile ungonwabela ngaphandle ngaphandle rhoqo kunokubangela imo yengqondo kunye nokuba sempilweni ngokupheleleyo.
Kulula ukwakha -Usebenzisa iikhabhathi zasekhitshini okanye ibhentshi eliphathwayo unokwenza isihlalo esinomtsalane sefestile. Yiphakamise ngee-cushions kunye neepilo ezentofontofo kwaye ufumane indawo usapho lonke onokuyonwabela.
Ikhitshi lesidlo sakusasa lasekhitshini -Isihlalo sefestile se-bay ekhitshini yindawo efanelekileyo ukonwabela ikofu yakho yasekuseni. Tsala nje itafile encinci ukwenza ifayile Isidlo sakusasa kwaye unendawo yokubeka isiselo sakho okanye i-pastry yasekuseni.
Indawo yokulala okanye yokulala -Izitulo ezinkulu zefestile zinokucwangciswa ukuba zibe yindawo yokuhlala iindwendwe ebusuku. Inokuba yindawo yakho oyithandayo endlwini ngenjikalanga yasemva kwemini kwilanga elifudumeleyo.
Ukuya kwi-boxy ngakumbi, ukubonakala kwendoda, esi sihlalo sefestile senziwe ngebhentshi eyakhelweyo eneenkcukacha zepaneli yakudala, iibhulukhwe zezihlalo eziluhlaza kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuphosa imithwalo kwimibala eyahlukeneyo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nengwevu. Ubume besiqingatha se-octagonal sendawo bubonelela ngeziko eliphangaleleyo, eloneleyo ukulingana itafile enkulu yokutya yokujikeleza eyiMahogany embindini.
Izimvo zesihlalo sefestile ezisebenzisa indawo ephantsi kwebhentshi yokugcina inokuba luncedo kakhulu ekugcineni iingubo kunye neepillow zingabonakali.
Le ndawo yendawo yokuhlala elungiselelwe udonga iyahamba ibonisa iindlela zokonga indawo, kunye nokujolisa kwezithuba ezininzi. Le bhentshi ineedrowa ezakhelwe ngaphakathi zokugcina ngakumbi, kwaye endaweni yokusebenzisa izihlalo ezivulekileyo zesihlalo, endaweni yoko isebenzisa oomatrasi ababini abangatshatanga ukuba basebenze njengesihlalo, esikwenza ukuba kube lula ukuphumla, kwaye njengendawo yokulala eyongezelelweyo yabantu ababini .
Ndibulise ekunene xa ungena kule foyer yeli khaya ligumbi elikhanyayo elinebhentshi lesihlalo sefestile. Ukukhanya kwendalo okuvela kwiifestile zomfanekiso kunye nokugcinwa kweetafile zezihlalo ezikhululekileyo kugcina le ndawo imema naziphi na iindwendwe.
Ukufumana ezinye izimvo jonga igalari yethu eyahlukileyo iintlobo zeefestile iyafumaneka kwikhaya elikweli phepha.
Ukungena kwekhaya kunokuba yindawo enkulu yebhentshi yokuhlala ebhentshini. Le yindawo efanelekileyo ukuba iindwendwe zilinde okanye abantwana basuse kwaye bagcine izihlangu ngaphambi kokungena kwindawo ephambili yekhaya.
Unokuzisa ubuntu bakho kunye noyilo oluchukumisayo ngokulungelelanisa ii-cushion ukuze ufumane isimbo osifunayo. Kumfanekiso ongasentla kwezihlalo ezihleliyo zifaniswe nepeyinti eludongeni kunye namakhethini aneziphumo ezilungileyo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwandisa iindawo ezincinci, ezifileyo ezinje ngalo mzekelo. Le ndawo yekona incinci kwaye incinci, kodwa inzulu ngokwaneleyo ukuvumela ibhentshi eyakhelweyo.
Ibhentshi lenzelwe ukudibanisa ngaphakathi kunye neenkcukacha zangaphakathi, ke ikwanayo neenkcukacha zokugqwesa kwisiphelo esimhlophe esifanayo neendonga. Ukutshatisa ipeyinti eludongeni engwevu, ii-cushions zezihlalo ezingahambiyo kunye nemiqamelo zizimvi, zineepatheni ezahlukeneyo kunye namalaphu okongeza ubume.
Ibhentshi yefestile elula eyakhelweyo ebekwe ngefestile yokubeka kabini isebenza njengendawo yeenjongo ezininzi. Sibekwe ecaleni kwishelufa yeencwadi ezakhelweyo, isihlalo sefestile siba yindawo efanelekileyo yokufunda kunye nokukhanya kwayo kwendalo. Ibhentshi ikwanazo neerowa ezinkulu ezi-2 ngaphantsi kogcino olongezelelweyo.
Lo mmandla uphakathi kweengcango zombini nangaphantsi kwefestile enkulu yesoftware uthathwa njengendawo efileyo, kodwa unikwa umsebenzi owongezelelekileyo ngokongeza ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi enesihlalo esibomvu esivulekileyo kwinqanaba kunye nefestile. Esi sihlalo sefestile yindawo efanelekileyo yokuphumla, okanye indawo yokuhlala eyongezelelweyo.
Izimvo zesihlalo sefestile ngokugcina kunokuba yinto enkulu yokudibanisa. Esi sihlalo sefestile sibekwe kwindawo yokuhamba-ngaphakathi, eyenza ukuba ibe luncedo kakhulu, ngakumbi xa ulungele izihlangu. Ibhentshi eyakhelweyo ikwonyusa indawo ngokubeka iidrowa ezinkulu ezimbini ngaphantsi, ibonelela ngokugcina ngakumbi kwigunjana.
Esi sihlalo sefestile sijikeleza lonke udonga lwendawo, kunye neefestile ezingaphantsi kwesakhelo, esenza indawo efanelekileyo yoluntu okanye indawo yentengiso, njengoko ivumela indawo engakumbi yokuhlala. Ukuncedisa ukujonga okwangoku kwesi sakhiwo, ibhentshi ikwanika i-retro vibe yanamhlanje kunye nale nto yokumnyama idityaniswe ne-backrest-striped backrest cushions, yongeza into eyonwabisayo kwenye indawo ecacileyo yobulumko.
Amakhaya amaninzi afuna yonke indawo yokugcina anokuyifumana. Ngebhentshi yefestile kunokwenzeka ukuba kwenziwe ukugcinwa kwekhabinethi yokubalekisa iithoyi kunye nelinen.
Esi sihlalo sinefestile esinegumbi elincinci labantwana sibonelela ngeedrowa ezimbini ngaphantsi zokugcina imidlalo kunye nezinto zokudlala. Iishelufu zokugcina ezongezelelweyo ezakhelweyo zihlala ngapha nangapha kwesihlalo sefestile ukwenza igumbi lokudlala elisebenzayo lomntwana.
Ibhentshi yokugcina eyakhelweyo iya kukhangela ukuvunwa kweediliya ngakumbi, ukudibanisa imibala eyahlukeneyo kunye neepateni, ukwenza uhlobo lwe-shabby chic. Izihlalo ezihlala ngokukhululekileyo ziphakanyisiwe kwilaphu leentyatyambo ezi-violet, ngelixa iipilisi ezisetyenzisiweyo zingwevu nobomvu, ngelaphu elinzima kunye neefrills.
Izimvo zesihlalo sefestile azidingi kuba nzima okanye kunzima ukuzongeza kuyilo lwakho lwangaphakathi. Esi sihlalo sefestile singabizi kakhulu sinendawo yokugcina izinto enesitayile sangoku esinokutshatisa izitayile ezininzi zamagumbi. Ibhentshi inokwakhiwa kweenkuni eziqinileyo kunye nendawo yokugcina ephezulu yeflip. Ibhentshi liyafumaneka ngemibala eliqela enje ngwevu, luhlaza okwesibhakabhaka, uprinta okanye indlovu.
Uphahla oluthambekileyo lwesi sithuba se-attic lunokuba nomda, kodwa olu luyilo luyakwazi ukulingana kwibhentshi enkulu emile njenge-L ukuze isebenze njengesihlalo segumbi elincinci leendaba. Ukugqitywa kweenkuni ze-teak zendalo zebhentshi yokugcina kufana nokugqitywa kweenkuni kwiifestile, kwaye kunikwa ukubukeka okuqabulayo ngakumbi kunye nokusetyenziswa kwesitulo se-mint esiluhlaza kunye nezihlalo zangemva kunye neepateni ze-turquoise.
Esi sihlalo setyhula simile ngokukodwa sinikezela ngesitayile se-cubbie evulekileyo ngaphantsi. Olu luyilo luya kuba lolulungeleyo kwigumbi lokudlala labantwana apho iithoyi zinokufikeleleka ngokulula kwaye zibekwe xa zingasetyenziswa.
Indlela entle yokubonisa ukubonwa okumangalisayo kolwandle kweli gumbi lokuhlala kukongezwa kwezihlalo ezibini zeefestile. Zombini iibhentshi ziyilelwe ukubonelela ngobuninzi beembono kwaye zilungele ukonwabisa abahlobo kunye nosapho.
Le ndawo ihleli kwikona ngokuqinisekileyo inika umtsalane weklasikhi kunye neefestile zayo eziqinileyo zeMahogany kunye nebhentshi eyakhelwe-ngaphakathi ebunjiweyo ye-L. Indawo ineefestile ezinkulu, isenza indawo ibonakale ikhanya ngakumbi. Ubume be-L bendawo buvumela indawo yetafile enkulu yokutya kunye nezitulo ezibini ezinokuhanjiswa kwesithethi.
Indlela elula yokwenza ukuziva kwesihlalo sefestile kukukhupha le Lark Manor Ambrine Bench. Ngeqhosha eliphambili elifakwe ngaphezulu komqamelo kunye nemilenze yesitayile yemveli le bhentshi inomtsalane kwaye inzima. Ibhentshi yemilenze emithandathu iyinika uzinzo ngakumbi kwaye inokuba sisongezo esihle phantsi kwegumbi lokuhlala, iholo okanye iwindow yegumbi lokulala.
Esi sihlalo sinebhentshi ende sihleli kwigumbi elincinci eshelfini eyakhelweyo kwitafile encinci. Imigangatho yeplanga yomkhombe incoma ubumenyemenye beplanga kunye nefestile enkulu evumela ubuninzi bokukhanya kwendalo. Imithwalo enemibala inokongezwa kwizinto ezikhanyayo kunye nokungafani nombala wokukhanya komthi webhentshi lewindow.
Esi sihlalo sefestile sembombo sahlukile ngokwaso njengoko senziwe ukuba sibonakale ngaphandle kokudibanisa iinkcukacha zangaphakathi. Ibhentshi igcina ukugqitywa kwepine kwendalo ngokuqinisekileyo okucacileyo ngokuchasene neendonga ezingwevu zokukhanya zangaphakathi.
Ikwasusa isihlalo somqamelo, kwaye ngokulula yongeza iindidi zemiqamelo yokuphosa intuthuzelo. Inezindlela ezimbini zokufikelela kugcino ngaphakathi kwebhentshi: ukusuka ngaphambili ngeengcango zekhabinethi nokusuka phezulu ngeengcango zomngxunya ezineehenjisi zokuhlala.
Ibhentshi lesihlalo esimnandi sokubhabha yindawo eyakhelwe-ngaphakathi. Ikona yokuhlala eyongezelelweyo yindawo efanelekileyo yokufunda kunye ne-lounging engaqhelekanga, nangona ukuphakama kwayo kwesihlalo kungayenzi indawo efanelekileyo yokuhlala.
Ukuya kwindawo epholileyo, ehlaziyayo, indawo ipeyintwe ngombala opholileyo wesilumko kunye neziqwenga zefanitshala eziluhlaza kunye nezibane ezimhlophe ezifudumeleyo. Izinto ezenziwe ngombala otyheli wesitulo se-bay seat zifezekisa isikimu sombala kakuhle.
Ingaphakathi lale mihla elinamafestile amakhulu atyibilikayo anefreyimu yomthi kunye nesihlalo esakhelweyo esakhelanayo senza indawo efanelekileyo yokuthetha kunye nokujonga imbonakalo yomhlaba.
Endaweni yokubeka isihlalo esikhulu sesihlalo sentuthuzelo eyongeziweyo, iziqwenga ezi-4 zebuton (okanye isihlalo saseJapan) zabekwa kubude besihlalo sefestile. Olu luyilo lwenza ukuba indawo ibhetyebhetye ngakumbi, ukuze ubasuse ngokulula kwaye uzibeke phantsi xa uziva ngathi usebenzisa ibhentshi njengetafile yokubonisa, okanye ufuna nje ukuqaqambisa ukugqitywa komthi ebhentshini.
Kuba le ndawo yefestile ye-bay inzulu, ibingasetyenziswanga njengesihlalo sefestile kuphela, kodwa ikongeza umaleko wetafile yokubonisa kanye emva kwebhentshi, elandela ubume bewindow ye-bay. Itafile emxinwa yokubonisa isebenza njengendawo yokuphumla esezantsi ukuze ungoyami ngqo kwiifestile, kunye nomphezulu apho ungabeka khona imihombiso kunye nezinye izinto.
Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili, esi sihlalo sefestile asakhelwanga ngaphakathi okanye similiselwe ezindongeni, kodwa yifenitshala evulekileyo, ehambelana nezinye iifenitshala zegumbi. Ibhentshi emile njengo-L ibekwe kwikona yegumbi eneeefestile ezimbini ezikufutshane ezibeka indawo kwindawo entle yangaphandle. Ibhentshi emile njengo-L ine-charcoal grey finish kunye ne-drawers yokugcina kunye ne-cushion ekhanyayo engwevu esihlalweni.
Ukusuka kule ndawo yokujonga umntu unokubona ukuba esi sihlalo sefestile simi ngaphandle kwendawo yekhitshi. Ngokuhlala ekhitshini umntu unokuyixabisa imbonakalo entle yangaphandle ngelixa esakwazi ukutya nokuhlala kunye nompheki.
Esi sihlalo sefestile bay kwigumbi lokulala sibonelela ngendawo entle yokonwabela izimvo ezivela kwigumbi lakho. Ngokudityaniswa kwemiqamelo emnandi oku kunokuba yindawo yokuphumla okanye kusetyenziselwe ukunxiba okanye ukunxiba izihlangu.
Ukuya kumbonakalo we-rustic / weediliya, esi sihlalo sembombo yewindow sigcina ukugqitywa kwepeyinti enezitena kwibhentshi eyakhelweyo ukuyinika imvakalelo yokuvuna eyiyo. Ukongezwa kwentuthuzelo, kunye nombala wombala, kwafakwa izitulo ezibomvu ebhentshini, kunye nemilo ebomvu ebomvu.
Esi sihlalo sinefestile yegumbi lokutyela sigcwele iithoni zemiqamelo entofontofo kwaye sinomxholo wombala ongathathi hlangothi wokutshatisa amanye amagumbi okuhombisa. Ngokucwangciswa kwesicwangciso esivulekileyo esi sihlalo sefestile yindawo entle yokuphumla ngencwadi, kodwa ke ube yinxalenye yento eyenzekayo kwindawo yokuhlala edibeneyo.
Ibhentshi yekona yokuhlala encinci yefestile yenza indawo yokutya efanelekileyo. Yongeza itafile ejikelezayo kwaye unyuse izitulo ezimbalwa ukwenza indawo emnandi yekomityi yekofu kusasa kwaye wonwabele umbono ngaphandle.
Esi sihlalo similiswe okw-L / isihlalo sefestile ngumbono omkhulu wegumbi lokutyela, usenza sive ngokungaqhelekanga, ngelixa sibonelela ngendawo yokuhlala. Le ndawo intle yokutyela ineendonga ezimhlophe kunye nezimhlophe ezikhanyayo ezidityaniswe neefestile zemifanekiso ezinkulu, ezenza ukuba isithuba sibonakale siqaqambe kakhulu.
Isihlalo esimiliselwe ngaphakathi esimilise u-L sihambelana noyilo lweepaneli zodonga kunye nokugqiba, kwaye songeze imitya ye-zabuton yokuthuthuzela. Ukujongwa okucacileyo kwebhentshi kuvumela ukusetyenziswa kwetafile yokutya yokugqiba ye-rustic kunye nezihlalo ezintle zokutya.
Le festile ye-bay ikweli gumbi lokutyela ngokusesikweni kubonakala ngathi bekulindelekile ukuba kubekho isihlalo sefestile esine-bay, ke oko kwenza ibhentshi eyakhelweyo ehambelana nodonga oluhlaza moss. Ukongezwa kwentuthuzelo, i-4 ″ eshinyeneyo yomqamelo eneepateni zegolide yabekwa ngaphezulu.
Esinye isihlalo sefestile kwigumbi lokutyela, lo mzekelo udityaniswa neepaneli zodonga kwaye uneenkcukacha zokubumba kunye nokugqitywa kwepeyinti emhlophe. Ibhentshi ende ayinaso isihlalo esihlalwayo, kodwa ineentlobo zemiqamelo enemibala eyahlukileyo yokuthuthuzela.
Sonke siyazi ukuba iikati zasendlini zithanda ukujonga ngaphandle, kwaye yintoni enokuba ngcono kubo kunesihlalo sefestile yekati. Le bati ikati ilinganiselwe ibhedi yenati inomphezulu onemiqamelo entofontofo kunye nokucoceka ngaphakathi kwebhedi yekati. Indlu emnandi inomqamelo ngaphakathi apho iikati zinokugoba khona kwaye ziphumle. Umphezulu ukwanomqamelo omnandi onokuhlambeka ukubanika indawo entle egumbini okanye ngaphandle.
Esi sihlalo sefestile senja sintofontofo senziwe ngezinto ezenziwe ngesikhumba esinefosifi kunye nomqamelo wesihlalo se-microvelvet. Umbhede wenja yindawo efanelekileyo yomhlobo wakho osenyongweni ukuba aphumle kamnandi. Isihlalo senja sinemilenze yokuyiphakamisa kancinci emgangathweni kwaye kukho nepokotho yokugcina ngasemva yokugcina iithoyi okanye ukuphatha. .
Olu luvo olukhulu kwaye kulula ukuba wenze indawo kwi windows bay. Isilayidi esityebileyo somthi we-teak esiqinileyo sabekwa kwikona yefestile ye-bay kwaye salungiswa ngemilenze ye-hairpin kwimbonakalo yanamhlanje yenkulungwane. Le ikwanaso nesihlalo esivulekileyo esine-white upholstery yokutshatisa iindonga kwaye sinemilo eqaqambileyo eluhlaza kunye neorenji yokongeza umbala wombala kwisithuba.
Xa usenza izihlalo zefestile kubalulekile ukubonelela ngemilinganiselo efanelekileyo yokuthuthuzela. Ngokwesiqhelo isihlalo kufuneka sibe phakathi kwe-16 ukuya kwi-intshi ezingama-20 ukuphakama nge-18 ukuya kwi-22 ye-intshi ubunzulu. Ukuphakama komgangatho kufuneka kube ubuncinci i-intshi ye-17 kungabikho ngaphezulu kwe-intshi ye-19 ukuphakama, njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha.
Esi sihlalo sefestile se-DIY sidityanisiwe ukuthelekisa iishelufu zencwadi ezakhelweyo kunye neempawu zebhedi yebhodi kunye nebhentshi elula yomthi. Imibono yezihlalo zefestile ze-DIY ezibopha kwipeyinti efanayo okanye ezigqityiweyo njengoko zifunyenwe kwigumbi lonke zingenza uyilo oluhambelanayo.
Olu luvo olukhulu lwesitulo esineefriji ezininzi zemisebenzi edibanisa ngokulula kunye nokugqitywa kwangaphakathi kunye neziqwenga zefanitshala. Esi sithuba sanamhlanje sineefestile ezenziwe ngomthi, esizisa ukukhanya okukhulu kwendalo.
Izitulo zefestile ayizizo izitulo, kodwa zisezantsi ezishelifini kugqityiwe ngomthi we teak obekwe ziifestile kwaye zilungiswe ngomqamelo wokuhlala obhityileyo. Oku kunokusebenza ngokulula njengendawo yokuhlala eyongezelelweyo, okanye umphezulu wetafile ongezelelweyo wakube ususe imitya.
Lo ngumzekelo omhle wendlela yokwakha isitulo esisisiseko sefestile esenziwe ngebhentshi / isiseko esineenkcukacha zepaneli kunye nokugqitywa kwepeyinti emhlophe, isitulo sokuhlala esisuswayo kunye nemibhobho embalwa enemibala / enemodeli yokugqibezela ukujonga.
Igumbi lokulala elihle linombala we-mustard etyheli kunye nombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukudala ukubukeka okuhle kakhulu kunye nokuhlaziya kwindawo. Indawo yokuhlala ngefestile ijongene nebhedi yobukhulu bendlovukazi, kwaye ineqhusheki lesihlalo elixineneyo elihambelana nelaphu elimthubi elisetyenzisiweyo kwizigqubuthelo zebhedi.
Amakhethini amafutshane aluhlaza wefestile nawo ahambelana namanye amalaphu aluhlaza kwisithuba, enza ukubukeka okumanyeneyo.
Indawo yokulala ephefumlelweyo yaseFrance ngokuqinisekileyo ikhupha ubuhle, kodwa isakwazi ukugcina iseti elula yokugqiba ukuyigcina ikhangelekile icocekile kwaye ikhanya. Indawo yokuhlala yegumbi inebhentshi eyakhelwe-ngaphakathi ngaphakathi enesiseko esimhlophe esimhlophe kunye nokulingana komqamelo wesihlalo esimhlophe kunye nokuphosa imithwalo.
Igumbi lokulala elihonjiswe kakuhle lithatha ithuba lokujonga ngefestile ngebhentshi elide lesitulo sefestile. Ibhentshi emhlophe ibonelela phantsi kwesitulo esigcina iishelufa zeencwadi ezifanelekileyo kunye ne-wardrobe kwikona yegumbi.
Zive upholile kwaye ukhululekile ngesikimu esilula semibala emhlophe, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nemvelo kwigumbi lokulala elihle. Isithuba senziwe nkulu ngokwenza iziqwenga zokugcina ezakhelweyo ezifakwe nakwikona ezingaqhelekanga kwigumbi.
Isitulo sefestile esineedrowa sinebhentshi yokugcina eyakhelweyo ehambelana nezinye iindawo zokugcina ezakhelweyo kwigumbi, ezimele ngokuchasene nopeyinti oluhlaza okwesibhakabhaka lweendonga.
Le ndawo yokulala yanamhlanje ithengisa iziqholo ezithe kratya kwinkangeleko yayo ngokusebenzisa iitoni eziorenji ezifudumeleyo. Uyabona ukuba igumbi lisebenzisa kakhulu abamhlophe njengokugqibezela kwalo okukhulu, kodwa longeza ukubanjwa kwezinto ezinetoni eorenji ezinje ngomthi wetiak, izitulo zesikhumba seorenji kunye noboya obuphosakeleyo.
Ikwanayo nebhentshi eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-orenji kunye nephuzi isitulo somqamelo esihlalweni ukongeza ubume obuncinci kunye nephethini kuyilo.
Igumbi lokulala elinesihlalo esimhlophe sefestile linee-moshi ezahlukeneyo ezingafaniyo kwimibala eyahlukeneyo. Iifestile ezinkulu zeli gumbi zibonelela ngamathuba amaninzi okuthatha ngaphandle kwinduduzo yegumbi lokulala. Imigangatho ye-oki ebomvu, uhombiso olunemibala kunye nokukhanya kwendalo kunceda ukugcina le ndawo ikhanya kwaye imema.
Izimvo zokuhlala ngefestile kwigumbi lokulala ziluncedo ngaphezu kokuzonwabisa nje, zinokusetyenziselwa ukugcinwa okongeziweyo kunye nokuhlala ukubeka izihlangu zakho. Esi sihlalo silula seglasi yokulala sime phakathi kweefestile ezintle zemifanekiso.
Ngokuchasene nebhedi isihlalo sefestile sakhiwe kwishelufa yodonga, esenza isihlalo sefestile sibe yindawo yokufunda efanelekileyo. Ibhentshi ine-cushion ehleliyo engwevu kunye neepilo ezimbalwa ezimibalabala zokuphosa intuthuzelo Igumbi licacisiwe ngokuhombisa nangokubumba, ukongeza ubunzulu kunye nobukhulu kumphezulu wodonga.
Igumbi lokulala leendwendwe linokunconywa ngebhedi yezihlalo eyakhelwe-ngaphakathi. Izimvo zesihlalo sefestile zebhedi zinokubonelela ngendawo eyongezelelweyo yokuphumla kwindawo yeofisi, xa ingasetyenziswa njengegumbi lokulala elineendwendwe. Iidrowa ezinkulu ezisebenzayo ngaphantsi zibonelela ngomthamo wolondolozo kwaye ngubani ongadingi ngaphezulu koko?
Zininzi iindlela zokuza nemibono yezihlalo zeewindows eziluncedo ezinokuphucula iofisi yakho yasekhaya. Ayiboneleli kuphela enye indawo yokujonga kude nedesika, ikwabonelela ngendawo yokuba ilungu losapho okanye umhlobo ahlale kwisithuba.
Ukwakha isihlalo sefestile ekhitshini lakho yindlela yoyilo yokongeza isicwangciso segumbi lakho ukulungiselela iindwendwe. Itafile yokutya enebhentshi ihlala ibekwe phantsi kwefestile kunye neziphumo ezilungileyo. Ukufumana indawo yeendwendwe ezingakumbi unokuzama ukongeza Isiqithi sasekhitshini esinendawo yokuhlala isitulo okanye ibha yesidlo sakusasa enezitulo zebha.
Esi sihlalo sefestile sasekhitshini silungele ukonwabela ukujonga kwiwindows. Yonke imixholo emhlophe yale khitshi ineekhabhathi ezimhlophe, izixhobo zokubala zemabhile kunye nesihlalo sefestile zigcina izinto ziqaqambile kwaye zinobunewunewu.
Le khitshi inebhentshi enkulu enesihlalo setafile enetafile yokutya engunxantathu enika indawo eninzi yokonwabela isidlo kunye nabahlobo kunye nosapho. Itafile kunye nezitulo ezisetyenzisiweyo kuyilo zinika isitayile se-cafe yakudala.
Leli khitshi elihle elivulekileyo elinetafile yokutyela yezihlalo zefestile libonelela ngendawo eninzi yokonwabela iifestile ezinkulu ngobuninzi bokukhanya kwendalo. Iindwendwe zinokutya kwikona yesihlalo setafile enetafile yeenkuni ezijikelezileyo okanye kwisiqithi sakusasa sasemarble.
Ikhitshi lelizwe elinesihlalo sefestile lenza indawo entle yokonwabela isidlo. Itafile yokutyela eyenziwe ngomthi inokuhlala abantu abane kwizitulo kwaye ucofe ezinye ezimbalwa uhleli ebhentshini lokuhlala. Imithwalo eluhlaza eluhlaza kunye negolide ikhanyisa indawo kwaye inceda ukugcina iindwendwe zicocekile.
Le khitshi imhlophe yekhabhathi emhlophe enesihlalo sefestile inika indawo iindwendwe ukuba ziphumle xa zisonwabela izimvo ezivela kumfanekiso omkhulu wefestile. Ukongezwa kwezihlalo ezibini kuyafumaneka kwisiqithi sakusasa sase-kitchen.
Iikhitshi zihlala zilungile kwimibono yezihlalo zefestile kuba ziyindawo apho umntu anokonwabela ukutya kwabo ngelixa exabisa imeko engaphandle. Esi sihlalo sefestile sekhitshi sinikezela ngezihlalo ezininzi ezijikeleze itafile encinci yeenkuni. Abo bafuna ukutya kwi ibhari yesidlo sakusasa yesiqithi sasekhitshini Ungayenza loo nto nakwesinye sezihlalo ezimbini zebar.
Le khitshi intle ifumene indlela esebenzayo yokusebenzisa isithuba esingezantsi kwale festile inkulu yemifanekiso ngokongeza isihlalo sefestile esenziwe ngedrowa. Olu luyilo longeza uninzi lweempawu kuyilo lwangaphakathi ngaphandle kokongeza iindleko ezininzi.
Le khitshi yelizwe ekhitshini enebhentshi enesitulo esinamagumbi amaninzi anokuhlala iindwendwe ezininzi ezijikeleze itafile yeplanga. Uhlobo lwekhitshi lwe-rustic olunemiqadi eveziweyo, ikhabethe yeenkuni ezixineneyo kunye nesiqithi sokuphikisana neenkuni zibonelela ngobume obumema nobushushu. Jonga kule galari ngakumbi Izimvo zokuhlala kwesiqithi sasekhitshini .
Siyathemba ukuba uyonwabele igalari yezimvo zesihlalo sefestile. Nceda usazise yeyiphi oyithandayo kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
phezulu mama unyana iingoma zokudanisa
indlela yokubopha iqhina lomoya elinye
mnike ixabiso leentsuku ezi-3
izipho zonyaka omnye
iintlobo zokubamba umnyango
Umama womtshato womtshato wempahla yesuti kunye nesayizi